Abakhiqizi & Abahlinzeki Bezimonyo - Indawo Yokukhiqiza EChina Yezimonyo
Umklamo ohlukile owenziwe umuntu, usebenzisa izinto ezisezingeni eliphezulu futhi ezinemvelo PU, ukukhethwa kwangaphakathi kwe-velvet enhle nethambile, ukuphela okuphezulu, ukuvezwa komoya okuhle. Kunezindawo eziningi ngaphakathi, ezilungele ukugcina amasongo, imigexo, imilebe, namasongo, amawashi, njll, okukuvumela ukuba uhlunge futhi ugcine izinto.
Isikhwama esisha sokulondolozwa kwesikhwama sezimonyo se-multi-function isikwele sokugcina sebhokisi lezitolo
Umhleli wemisebenzi eminingi, leli bhokisi lokulondoloza elisebenza ngezinto eziningi zomsebenzi wesikebhe lenziwe ngekhwalithi ephezulu esezingeni eliphezulu futhi enobuhlobo bendawo ye-Oxford, okungubufakazi be-Splash-proof, ukumelana nokushayisana, okufakazela izinyembezi futhi okulula ukuwahlanza. Ilungele ukuhamba, ukupakisha ngaphandle, ukuhamba ngezinyawo, ukukhempa ngamaholide, ukuya echibini lokubhukuda noma olwandle, ebhishi, ejimini.
Isikhwama esisha Sokugcina Isimpahla Sokugezela Amanzi eNylon
Izinga eliphakeme: Isikhwama esibalulekile sohambo senziwe nge-nylon esezingeni eliphakeme, engenamanzi futhi ihlala isikhathi eside, kulula ukuyihlanza, kabusha, inemvelo, impilo ende yenkonzo, isitoreji esihle sezimonyo, siyindawo efanelekayo yezikhwama zepulasitiki.
Isikhwama esiphathwayo sokuhambisa izimonyo esikhwameni sokugcina sezimonyo
Isikhwama sezimonyo asikwazi ukungabi nje kuphela isikhwama sokuwasha, kodwa futhi nesikhwama sezimonyo, isikhwama sokugcina, njll. Isikhwama sokuhamba esinokusetshenziswa okuningana. Kwenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme ezinemvelo ezinobuthi be-polyester, umswakama-ubufakazi, amanzi, kungavikela izinto zakho, futhi kulula kakhulu ukuzihlanza.